घुँयत्राे : ओलीबाका अगाडि त अब वकालत गरी खान नी गाह्रो छ – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार १४:२९ मा प्रकाशित
ओलीबाका अगाडि त अब वकालत गरी खान नी गाह्रो छ । ओलीबा फायर भएर “कालोकोटधारीहरु“ भनेर पत्रकारसित रुवाबासी गरेसी अहिले बिचरा कालोकोटधारीहरु नी ओलीबासित हारथाक हुने स्थिति पो आयो त हँ । के गर्ने अदालतका न्यायाधीश नी नेपालका दलहरुले भागबण्डा गरेर नियुक्त गरेसी कसका न्यायाधिश को हुन् भन्ने स्पष्टै छ ।
ओलीबा संसद विघटन गर्दै चुनाउ गराउँछु भन्दै हिँडने । अनि न्यायाधिशहरु संसद विउँताउने निर्णय गर्दै हिँडने गरेछि ओलीबाले नी वकिललाई भन्या जस्तैगरी न्यायाधीशलाई नभनी नहुने स्थिति आजस्तो बुझ्झीयो । ओलीबा प्रधानमन्त्री भएछि जे पनि गर्न पाईन्छ, प्रधानमन्त्रीले नगर्या संसद विघटन कल्ले गर्ने भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्री को रहनु नी ठिकै हो । हुन पनि एमालेका भागबण्डाँ पर्या एघार जना न्यायाधीश सर्वोेच्चाँ छन् रे । ती बहुमत संख्याँ भाका न्यायाधीशहरु अदालताँ हुदाहुँदै नी ओलीबाले मुद्दा हार्ने हो त ?
न्यायाधीश बनाउने बेलाँ एमाल्या सरकारले अध्यादेश ल्याई विपक्षीको हुर्मत सहेर न्यायाधीश बनाउनुपर्ने । अनि त्यही एमालेलाई चाहिया बेलाँ तिनैले लोप्पा ख्वाउनु त भएन नी । नुन खाएसी नूनको सोझो त गर्नै परो हैन र ? कहिले बजेट ल्याउने नाममा जनतालाई सम्बोधन भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शैलीमा आँफै टिभीमा मरणासन्न हुनेगरी कराउनु हुन्छ र जनता अगाडि आँशु झार्नु हुन्छ ।
अनेकथरी नौटंकीका पारंगत प्रधानमन्त्री अहिले फेरि पार्टी भित्रका माकुने प्यानलका १२ जना दोस्रो तहका नेताहरुलाई आफ्नो बसमा पारेर माधव नेपालको पत्तासाफ गर्ने खेलाँ लाग्नु भाछ । हेरम अदालताँ ओलीबा र शेरबहादुर बीच चल्या मुद्दाले कता कोल्टे फेर्ने हो ।
भन्न त मान्छेले ओली र मधेसीको जालझेलमा राष्ट्रपतिले गर्नै नमिल्ने काम गर्यै छिन् । त्यसैले कानून जति अन्धो हुन्छ भनेनी त्यल्ले न्याय पैल्याई हाल्छ र देउबाले मुद्दा जित्छन् भन्छन् । त्यसैले तिन ैकुरा सुनेर अनेक तर्क गर्दागर्दै अब मेरो यो सारा सेरोफेरो रासलिला सब सक्दिने हुनकी माधव र देउबाले भनेर नि बिचरा ओलीबा दिनकै बतुराउनु हुन्छ । त्यही झोकाँ कहिले वकिल त कहिले न्यायाधीश, अनि कहिले आफ्नै कार्यकर्ता पर्छन् । फैसला नआउँदासम्म ओलीबालाई अल्लि गाह्रै छ ।
त्यसैले ओलीबाका ढोके, बैठके, चम्चे, भिरे, अरिङ्गाल, साईबरसेना जो जता भएनी ओलीबाको नजिक गएर बस । ओलीबा बेसुर हुँदाहुँदै ल गद्दि छोडेर हिँडें भनेर बेसुरमै भन्दिनु भो र विपगीहरुले नी त्यही मौकाँ गद्दि छिने भने तिमीहरुले फेरि कुकुरले नपाउने दुख पाउँछौ । ह्याँभन्दा बढि के भनम र ?